IChippa ihlawulise o weChiefs obenyamalele | News24
IChippa ihlawulise o weChiefs obenyamalele
Johannesburg - Umdlali wasesiswini weChippa United, uChris Matombo, usebuyele kuleli qembu ngemuva kokuba kwakubikwe ukuthi akaziwa ukuthi ukuphi.
Phambilini kubikwe ukuthi lo mdlali oneminyaka engu-21 ubudala obolekiswe yiKaizer Chiefs kuleli qembu leChippa, unyamalele ngeledlele ngaphambi kokuba leli qembu lilibangise eGoli ukuyodlala ne-Orlando Pirates.
Funda nalolu daba: OweBucs uvuma eyokuxhumana neDowns
Umqeqeshi wamaChilli Boys, uRoger Sikhakhane, uthi uMatombo usebuyile, watshela iKickOff.com ukuthi: “Uhlawulisiwe yiqembu. Usebuyele ejimini kanti futhi ungomunye wabadlali abangase bakhethwe ukuba badlale emdlalweni olandelayo.”
IChippa izobhekana ne-University of Pretoria kowe-Absa Premiership ngoLwesibili ebusuku.